Dean Smith Aabihii Oo La Xaqiijiyey Inuu U Geeriyooday Xanuunka Covid 19? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa murugada geerida la qaybsanaya mid ka mid ah tababareyaasha kooxaha dalkaas oo uu aabbihii u geeriyooday caabuqa Korona.
Tababaraha kooxda kubadda cagta Aston Villa ee Dean Smith ayaa la xaqiijiyey in aabbihii oo in muddo ah la dhibaataysnaa xanuunka uu geriyooday.
War-saxaafadeed ay soo saartay Aston Villa ayaa lagu sheegay in Ron Smith oo dhalay tababare Dean Smith uu geeriyooday afar toddobaad kaddib markii uu haleelay caabuqa oo muddadaasna uu ku jiray cusbitaalka.
Ron Smith oo taageere weyn u ahaa kooxda uu wiilkiisu tababaraha ka yahay, ayay da’diisu ahayd 79 jir.
“Qoyska Aston Villa waxay iyagoo murugaysan ay shaacinayaan geerida ku timid Ron Smith, aabbaha tababaraha kooxda koowaad ee Dean, kaas oo ku geeriyooday da’da 79 jir.” Ayay Aston Villa ku tidhi war-saxaafadeed ay soo saartay.
War-saxaafadeedku, waxa kale oo uu intaa ku daray in Ron uu hore u qabay xanuunka kansarka oo laga daaweeyey lix sannadood ka hor, laakiin caabuqa oo helay afar usbuuc ka hor loo dhigay cusbitaal uu ugu dambayntiina ku geeriyooday.
Kooxdu waxa kale oo ay sheegtay in Ron uu muddo dheer u ahaa taageere iyo qof jecel oo illaa carruurnimadiisii uu soo garab taagnaa.
Tababareyaasha, maamulka Premier League iyo kooxaha ayaa iyaguna tacsi gaadhsiiyey Dean Smith, waxaanay xuseen inay aad uga murugaysan yihiin warka naxdinta leh ee sheegaya in Ron Smith uu u geeriyooday caabuqa.
Waddanka Ingiriiska ayaa kaalinta labaad kaga jira dalalka uu caabuqu dadka ugu badan ka dilay, waxaana u geeriyooday in ka badan 37,000 qof, waxaana kaliya ka horreeya Maraykanka.